नेपाल आज | मेयर र शेर्पालाई सुन तस्करीको आरोप, शेर्पा भन्छन– अरुले पनि भन्सारलाई प्रभाव पारे हुन्छ (भिडियोसहित)
समाचार व्यापार अर्थ रोजगार भिडियो
मेयर र शेर्पालाई सुन तस्करीको आरोप, शेर्पा भन्छन– अरुले पनि भन्सारलाई प्रभाव पारे हुन्छ (भिडियोसहित)
सिन्धुपाल्चोकको मांखा र राम्चेको सीमा क्षेत्र जुरेमा विनासकारी पहिरो गएको ६ वर्ष वितेको छ । ०७१ साउन १७ गते भएको उक्त घट्नामा परी ३१ जना स्कुले वालवालिकासहित १ सय ४५ जनाले ज्यान गुमाए। आठ परिवारको एक जना सदस्य पनि बाँचेनन् ।
पहिरोले सुनकोशी खोलालाई २४ घण्टासम्म थुनेको थियो। विद्युत गृह, विद्यालय, रिसोर्ट, निजी व्यापारिक फर्म र स्थानीयवासीसहित १५३ घर परिवार प्रभावित भए । पहिरोका कारण अर्वौको क्षती भयो ।
कहालिलाग्दो प्राकृतिक दुर्घटनामा परी धेरै घरहरु मानवबिहिन बने, धेरै बालबालिका अविभावकबिहिन भए। इटिनी, कागुने, ड्यामसाइड तथा पराजुली बस्ती कहिल्यै प्रयोग गर्न नसक्ने गरी ठूलाठूला चट्टान र बालुवाले पुरिएर मरुभूमिमा परिणत भएको छ ।
भाग्यले बाचेकाहरु पहिरोले पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति सम्झिएर अझै आसु पिएर बसिरहेका छन । अहिले पनि उनीहरुको पीडामा मल्हम लागेको छैन । जुरेपहिरोबाट सुरु भएको सीमाक्षेत्रमा विपद अझै रोकिएको छैन। त्यस्तै भयानक दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ला भन्ने त्रासका कारण सर्वसाधारणले अहिले पनि शान्तिको सास फेर्न पाएका छैनन् ।
तर, यहि प्राकृतिक दुघट्नालाई त्यहाँका केहि जनप्रतिनिधिले कमाई खाने भाँडो वनाएका छन् । हाल त्यहि पहिरोमाथि क्रसर उद्योग सञ्चाल गरिएको छ । ६ वर्षअघिको पहिरोका कारण जुनसुकै वेला पनि अर्को दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना भएको क्षेत्रमा क्रसर संचालन गरेर थप जोखिम निम्त्याईएको सर्वसाधारणको भनाई छ ।
स्थानीयका अनुसार क्रसर उद्योगमा वाह्रविसे नगरपालिकाका मेयर निमफुन्जो शेर्पासहितको लगानी छ। कानुनी प्रकृया समेत मिचेर अवैधानिक रुपमा संचालनमा आएको क्रसरका कारण अर्को ठुलो विपत्तीको तयारी भईरहेको उनीहरुको दुखेसो छ । मेयर आफैले आधा लगानी गरेर संचालनमा ल्याएका कारण क्रसर उद्योग विरुद्ध कसैले पनि औंला उठाउन नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ का कांग्रेस सभापति वालकृष्ण वस्नेतले पनि क्रसर उद्योगका कारण वरीपरीको क्षेत्र जोखिममा परेको वताए । ‘भौगोलिक हिसावले सिन्धुपाल्चोक अतिनै जोखिममा छ। त्यसलाई ध्यान नदिएकै कारण जुरे पहिरो गयो’ वस्नेत भन्छन्–‘पहिरो गएको त्यहि जनताको जग्गामा अहिले मेयर सा’व क्रसर खोलेर ढुङ्गा र वालुवाको ब्यापार गर्दै हुनुहुन्छ।’
शिक्षामा त्यति धेरै पहुँच नभएका र निर्वाचन पुर्व तस्करी गरेर नाम र दाम कमाएका मेयर शेर्पाको अदुरदर्शीता र घमण्डका कारण जनताले दुःख पाएको उनको आरोप छ । मेयर शेर्पा चीनवाट हुने सुन तस्करीमा संलग्न भएको स्थानीयहरु आरोप लगाउँछन् । ‘उनको धन्दा भनेकै यतावाट हरियो लाने, उतावाट पहेंलो ल्याउने हो’ एक स्थानीयवासी भन्छन्–‘यति कुरा त वच्चा–वुढा सवैलाई थाहा छ।’
मेयर शेर्पाले विवादास्पद सिल्क ट्रान्सपोर्टका संचालक रमेश शेर्पासँग मिलेर सुन तस्करी गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मेयर शेर्पा र सिल्कका संचालक रमेश मामा–भान्जा हुन् । निमफुन्जो स्थानीय चुनाव लड्दा आर्थिक पाटो रमेशले नै जिम्मा लिएका थिए । चुनावका लागि उनले निमफुन्जोलाई ३ करोड रुपैयाँ र एउटा हाईलक्स गाडि उपलब्ध गराएको चर्चा छ ।
रमेश शेर्पाको सिल्क ट्रान्सपोर्ट आफैं पनि विवादित छ। सिल्कले भन्सार कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पार्ने गरेको त्यस क्षेत्रका जानकारहरु वताउँछन् । चीनबाट नेपाल आउने समानमा सिल्क ट्रान्सपोर्टको एकाधिकार छ। सिल्क ट्रान्सपोर्टले चीनको मुसा लजिस्टिकसँग सामान आयातको सम्झौता गरेको छ। हाल रसुवागढि र तातोपानी भन्सारमा सिल्क ट्रान्सपोर्ट र मुसाले मात्रै सामान ओसार–पसार गरिरहेका छन् ।
सिल्क ट्रान्सपोर्टको एकाधिकारले स्थानीय कन्टेनरहरू विस्थापित भए। समस्यामा परेपछि धेरै मानिसहरूले अति नै कम मूल्यमा कन्टेनर बेचेका छन्। सिल्कले सुख्खा बन्दरगाहमा सिधा कन्टेनर ल्याइरहेका कारण मानविय कार्य समेत वन्द छ। रोजगारी नपाएपछि स्थानीयवासी चिन्तित छन् ।
भन्सारलाई प्रभावमा पारेको र सुन तस्करी गरेको विषयमा रमेशले स्पष्ट जवाफ भने दिएनन्। तर, घुमाउरो पारामा उनले दुवै कुरा स्विकार गरेका छन् । भन्सारलाई प्रभावमा पारेको भन्दै तपाई माथि लाग्ने आरोप सहि हो ? भन्ने प्रश्नमा शेर्पा भन्छन्–‘सक्ने भए अरुले पनि प्रभावमा पारे भईगयो नी ।’ यसैगरी, सुन तस्करीको विषयमा पनि उनले ‘आरोप लगाउनेहरु लगाउँदै गर्छन। तर, आरोप लाएर मात्र भएन, प्रमाण चाहियो नी’ भन्दै जवाफ दिएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. १ का कांग्रेस सभापति वालकृष्ण वस्नेतको प्रतिक्रिया हेर्न तलको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस।